Faah faahin: Qarax ka dhacay Sh/Hoose | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Faah faahin: Qarax ka dhacay Sh/Hoose
Faah faahin: Qarax ka dhacay Sh/Hoose
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax Jidgal ah oo kolonyo ka tirsan Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM lagula eegtay qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha hoose.
Kolanyada qaraxa lala beegsaday waxey ku socdaalayeen wadada isku xirta degmooyinka Baraawe iyo Buulo Mareer, iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay degmooyin iyo degaano ka tirsan gobalkaasi.
Shabaab oo weerarkan uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaan waxa ay sheegeen Miinada in ay haleeshay mid ka mid ah Gawarida Gaashaaman ee ay wateen Ciidamada AMISOM.
Sidoo kale Shabaabka waxa ay sheegeen inuu burburay Gaarigii Qaraxa lala eegtay, sidoo kalena ay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay Ciidamii la socday gaariga.
Weli Saraakiisha Ciidamada AMISOM faah faahin rasmi ah kama aysan bixin Qaraxan lagula eegtay Gobolka Shabeellaha Hoose, ee khasaaraha lagu gaarsiiyay mid ka mid ah Gawaaridooda iyo qaar ka tirsan Ciidamadooda.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Federaalka ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa bilaabay Howlgallo amni xaqiijin ah iyo sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii ka dambeeyay Qaraxan Ciidamada lala eegtay.